That Time I Got Reincarnated asaSlime – MMANIME
Created byKazuyuki Fudeyasu, Yasuhito Kikuchi
StarringAkane Kumada, Atsushi Ono, Haruki Ishiya, Houchuu Ootsuka, Itaru Yamamoto, Jun Fukushima, Jun'ichi Yanagita, Juri Kimura, Kanehira Yamamoto, Kazuya Nakai, Ken Narita, Kengo Takanashi, Kenjirou Tsuda, Kobayashi Chikahiro, M·A·O, Makoto Furukawa, Megumi Toyoguchi, Miho Okasaki, Rie Tanaka, Rina Hidaka, Ryuuichi Kijima, Sayaka Senbongi, Takaya Hashi, Takuma Terashima, Takuya Eguchi, Tomari Asuna, Tomoaki Maeno, Yumiri Hanamori
Synopsis of That Time I Got Reincarnated asaSlime
Romaji – Tensei shitara Slime Datta Ken
English – That Time I Got Reincarnated asaSlime
Japanese – 転生したらスライムだった件
Type – TV
Status – ထုတ်လွှင့်ဆဲ
ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့်နေ့ရက် – အောက်တိုဘာ (၂) ရက် ၂၀၁၈ မှ ?
Broadcast – Tuesdays at 00:00 (JST)
ထုတ်လွှင့်သည့်ရုပ်သံလိုင်းများ – Lantis, BS11, Bandai Namco Arts, Micro Magazine – Publishing
Licensors – Funimation
Studios – 8bit
Source – Manga
Genres – Fantasy, Shounen
ကြာမြင့်ချိန် – 23 min. per episode
Rating – PG-13 / Teens 13 or older
(၃၇) နှစ်အရွယ် Satoru Mikami ဟာဆိုရင် တစ်ကိုယ်တော် (FA) ဘဝ နဲ့နေထိုင်ခဲ့သည့်မှာ သူ့ဘဝ တစ်လျှောက်လုံးနီးနီး ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်၊ တစ်နေ့မှာတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကနေ သူ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်၊ သူ တစ်ဖန်ပြန်လည် နိုးထ လာတဲ့အခါမှာတော့ သူရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သူကိုယ်တိုင်ဟာ ထူးခြားနေတာကို သူသတိထားမိပါတော့တယ်၊ အဲ့တာကတော့ Slime လို့ခေါ်တဲ့ ချွဲကျိကျိ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ မွန်စတာ ငယ်လေးတစ်ကောင်(Fantasy Game ဆော့ဖူးတဲ့လူတွေသိတယ်) အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲနေပါတော့တယ်၊
အဲ့လိုနဲ့ဘဲသူလဲ Skill အသစ်တွေသင်ယူရင်ကနေ Veldora လို့ခေါ်တဲ့ မုန်တိုင်း နဂါးတစ်ကောင်နဲ့ ဆုံတွေ့လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့၊ Satoru ကွန်ရဲ့ဘဝက ဒီ စိတ်ကူးယျဉ်ကမ္ဘာထဲမှာဘဲ အသက်ရှင်မှာလည် သူဟာ အပြင်လောကမှာကော တကယ်သေဆုံးသွားခဲ့ပြီလား၊ ဒီကမ္ဘာမှာဘဲ ဆက်လက်စွန့်စားခန်းတွေ ဖွင့်ကြမဲ့ ပုံကို Tensei shitara Slime Datta Ken (AKA) Slime တစ်ကောင်အဖြစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း ဆိုတဲ့ Anime လေးမှာဆက်လက်ကြည့်ရှု့လိုက်ပါအုံး
Season 1 (Full Episode)
Airs OnBS11, Tokyo MX
Firt air date2018-10-02
Last air date2019-03-19
Home PageThat Time I Got Reincarnated asaSlime
Inazuma Eleven Go( イナズマイレブン ) GO